TTSweet: အသာလုပ်ပါ ခရစ်ကက်တို့ရယ် ...
Posted by T T Sweet at 7:22 PM
မြသွေးနီ January 6, 2012 at 8:10 PM
ဦးဦးဖျားဖျား အရောက်လာခဲ့တယ် အစ်မဆွိရေ...။
မြသွေးလည်း Phone Alarmကို အမြဲ ထချင်တဲ့အချိန်ထက် နာရီဝက်စော ပေးထားတယ်။ မြည်လာရင် လှမ်းပိတ်၊ ပြန်အိပ်လိုက်တာ အမြဲတမ်း ထချိန်ထက် နာရီဝက်နောက်ကျတယ်..။ အိမ်ကတစ်ယောက်က Alarmပေးမနေပါနဲ့..၊ ဘာမှ မထူးပါဘူးတဲ့.. ဟိ။
ဘယ်လုို alarm သံဖြစ်ဖြစ် မုန်းနေတုန်းဘဲ။ ကိုယ်လည်း ၁၅ မိနစ်စောပေးတယ်။ သူလည်းကွန်ပလိန့် လာတာဘဲ။
နေမကောင်းလို့ များလားလို့ တော်သေးတာပေါ့...
satisfied to readanew post
need to waitalong time to read it ;)
မြူးမြူး January 7, 2012 at 2:09 AM
တီဆွိ alarm က ခရစ်ကတ်မို့တော်သေးတယ်.. အိမ်ကကျားကျားဖုန်းမှာ လုပ်ထားတာက emergency alarm သံကြီး.. ကိုယ်အလုပ်မသွားတဲ့နေ့ သူ့ဖုန်းနဲ့ alarm ပေးရင် မီးလောင်လို့ပဲ ထပြေရတော့မလိုလို.. ဆိုးပါ့..
Anonymous January 7, 2012 at 6:04 AM
ကျနော်က Alarm ကို ဆယ်မိနစ်ခြား ၃ ခါလောက်ပေးထားရတယ်။ အဲဒါတောင် တခါတလေ ဖုန်းကို ခွအုံးအောက်ထိုးထည့်ပြီး ဆက်အိပ်သေးတာ။
ရယ်လိုက်ရတာ။ ကိုယ့်တုံးကလဲ ဒီလိုပဲ vibration လုပ်ထားပြီး ကိုယ်က မေ့နေရော... နောက်တရက် ဖုန်းလာတော့ စားပွဲပေါ်မှာ ဖုန်းက တဗူးးဗူးလုပ်ပြီး တုန်နေတာ အမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ ထမင်းစားရင်း လန့်တောင်အော်မိတယ်....
ကျော်နှင်းဆီလွင် January 7, 2012 at 2:04 PM
ညီမလည်းလေ အဲလိုပဲ စောနိုးရင် ဖုံးမြည်လာတာကို ပြန်ပြန်စောင့်တတ်တာ သတိရတယ်
mae January 7, 2012 at 9:14 PM
Theint January 7, 2012 at 11:45 PM
အဲလိုလုပ်ပါ အမ..ပိတ်သတ်ကြီးကခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါတယ်( Thanks for new post)
Happy New Year, Ty sweet and family!
ကိုဇော် January 8, 2012 at 5:36 AM
အဟ . . .
San San Htun January 8, 2012 at 2:03 PM
ရယ်လိုက်ရတာ ဗရူးဗရူး..တိတ်ဆိတ်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ ဗရူးဗရူး က ringtone ထက် ကျယ်လို့လန့် ခုန်မိတယ်
ခရစ်ကက် အော်တာနဲ့ မြားလေးထဆွဲတယ် ဆိုတော့ ခရစ်ကက်ကို မြားနဲ့ ပြစ်တော့မယ်လို့ ထင်သွားတယ်။ သေသေချာချာ သုံးခါ ပြန်ဖတ်တော့မှ အိုင်ဖုန်းကဆလိုက်တူအန်လော့ကို ဆိုလိုတာကိုး။ ရယ် လိုက်ရတာ....
ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တာ တခုလောက် မေးချင်တယ်။ ဗမာပြည်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ စင်ကာပူမှာ အဲ့လိုမျိုးကားခံပို့ပေးတဲ့ နေရာလေးများရှိလားသိချင်လို့ပါ၊ မဆွိရဲ့ အီးမေးလ်ကိုလဲ မသိတာရယ် အာရှဘက်နဲ့လဲ အဆက်အသွယ် မရှိလို့ပါ၊
အမရဲ့ အီးမေလ်းလိပ်စာလေးလဲ ကိစ်စမရှိဘူးဆိုရင် ပြောပြပေးပါလား။ အခက်အခဲရှိရင်လဲ နားလည်ပါတယ်၊ လေးစားလျက်
mgchaint January 9, 2012 at 12:53 PM
စင်္ကာပူ ပင်နီစူလာမှာ ပို့တဲ့ဆိုင်တွေ၇ှိပါတယ်။ တစ်ကီလိုကို စင်္ကာပူငွေ ၆-၇ကျပ်လောက်ပေး၇ပါတယ်။ အီလက်ထေ၇ာနစ်ဆို၇င်တော့ မူလတန်ဖိုး၇ဲ့ ၁ဝ၇ာခိုင်နှူန်းယူမယ်ထင်ပါတယ်။ ပျောက်၇င်လျော်ပေးတယ်။ လူကိုယ်တိုင်သွားမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ အွန်လိုင်းမ၇ှိကြပါဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကိုမောင်ခြိမ့်၊ ကျမလောလောဆယ်ဆယ် လူကိုယ်တုိုင်မသွားနိုင်သေးတော့ ဘာလုပ်ရမလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး။ လေးစားလျက်
The Queen January 11, 2012 at 4:17 PM
so funny, it's happening the same to me sis,,
ကြယ်ပြာ January 19, 2012 at 8:56 PM
ပုရစ်ကို စတင်းဂန်းနဲ့ဆွဲတဲ့ အသံတဲ့ နားထဲမှာ အလိုလိုကြားယောင်သွားမိတယ် .... ပို့စ်လေးဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်။ မုန့်လုံးရေပေါ်လုပ်နည်းရှာရင်းနဲ့ ဒီရောက်လာတာ။ တခါမှ သေချာမဖတ်ဖူးဘူး ... နောက်မှ မွှေနှောက်ပြီး သေချာဖတ်ဦးမယ် အစ်မဆွိရေ ....
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ၊ တရားပွဲ ဖိတ်စာ January 21, 2012 at 2:46 PM
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး တရားပွဲ ဖိတ်စာကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ )
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ၊ တရားပွဲများကို ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားပါသည်။
(ပို့စ် အောက်မှ ကွန်မန့်တွင် ဖတ်ပါ)
မျှော့နေတဲ့ ပိတ်သတ်ကို စာနာသောအားဖြင့် ပိုစ့် အသစ်တင်သင့်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းးးးး
New post ! New Post! .....
စာရေးဖို. မုဒ် မ၀င်ဘူးဖြစ်နေတာလား။။
T T Sweet!
How are you? Ju Ju is still in holidays?